Protivopedikulezny izidakamizwa "Pedikulen Ultra ': Izibuyekezo iziguli kanye nezifundiswa
Sonke siyazi ukuthi pediculosis (izintwala), kanti ezinye ngokuphazamisa iyona isifo. Kodwa lesi sifo enkingeni ukuthi izimpawu zalo zivele izinsuku ezimbalwa emva kokutheleleka. Le ndoda ekhononda ka ukulunywa ezinzima ekhanda, ezindlebeni nentamo, bese kuthola izindawo abomvu nguphoyizeni ezidala. Ukunwaya ngokuvamile kuholela ukutheleleka suppuration.
izigaba Advanced waba nezintwala ekhanda libhekene lakhulisiwe lymph node ngemuva ezindlebeni. Kufanele kuqashelwe ukuthi kuyingozi kakhulu womuntu umzimba izintwala, okuyizinto abathwali yesifo sezintwala. Phezu ukuthola lezi izimuncagazi ngokushesha kufanele protivopedikuleznymi kucutshungulwa ejenti kanye magciwane izindlela ezikhethekile.
Omunye ephephile futhi ngemithi yanamuhla namuhla "Pedikulen Ultra". Ukubuyekezwa kusukela kubasebenzisi be ukuqinisekisa umphumela okusezingeni eliphezulu zokwelapha. Kusho luyasetshenziswa endaweni CIS futhi eRussia iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu nangaleso sikhathi uye baqashelwa kusuka odokotela okuholela kanye nezikhungo zocwaningo Rospotrebnadzor ezweni lethu. Inethiwekhi Pharmacy Ungathenga isifutho futhi elangeni, kanye izakhi elikulesi sihloko - ikamu futhi khulu.
emaphaketheni elula ikuvumela ukulawula umthamo oyifunayo bese fafaza ichashaza in bite fafaza "Pedikulen Ultra» Izibuyekezo zabantu abaye basebenzisa izidakamizwa, sabona inqaba okusheshayo futhi wasekela imiphumela. Kakade emva kokwelashwa wokuqala kukhona ukuba ngcono okukhulu. Nit angu nezintwala nje musa ukudlulisa ingxenye izingxenye izidakamizwa futhi sifo iyafa ngokushesha.
Kungasetshenziswa ku pubic futhi waba nezintwala ekhanda spray elangeni "Pedikulen Ultra". Izibuyekezo nezilinganiso lodokotela libhekene esebenzisa uhlangothi, kubhekwa omunye the best zinambuzane. zokuphepha ezahlukene kanye nenqubomgomo zamanani eyamukelekayo, ngokungafani kuya iningi nemithi amazwe isenzo esifanayo.
Sebenzisa ke bavumela izingane ezincane kusukela eminyakeni emi-5 ubudala. Le kit kuhlanganisa izesekeli ezifana ikamu, futhi ingilazi enkulu. Sinikeza imikhiqizo kusheshiswe umsebenzi wokususa izimuncagazi kusukela kanzima ukuze afinyelele izindawo ekhanda. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi singakanani "Pedikulen Ultra". Vele bazothi ukuthi amanani alo ayibizi kakhulu, ngaphakathi ruble 150.
Zonke izindlela zenziwa ngokuqinile ngesisekelo izithako zemvelo: uwoyela anise futhi isopropyl alcohol. Amafutha ebalulekile kunomphumela emibi izimuncagazi, kunciphisa ukuvuvukala ukucasuka. Ngaphezu kwalokho, kule formula kusho aduduzayo esikhumbeni.
Eyesibili isithako - utshwala isopropyl - enobuthi kakhulu izintwala, zingene umgudu wokuphefumula, ivimbela okumelwe uphefumule futhi ukhulume okubangela ukufa kwabo. Pro izindlela "Pedikulen Ultra" Imfundiso kanye nemibiko ukuthi izidakamizwa ayiluthi e izinambuzane asathuthuka futhi ngokushesha akuqede.
Usifaka kanjani isicelo?
Ngokulinganayo sisebenzise yokufutha izinyawo noma lotion (50 ml ngesikhathi) izindawo yezinyosi umzimba, massaging kancane. Shiya on for isigamu sehora bese ugeza imoto. Thatha ikamu ngesibona-khulu futhi ngokucophelela ayesebenza phandle izinwele izinambuzane efile.
Ngaphambi yokufafaza kufanele gqoka amagilavu zokuzivikela futhi zigweme ukuthintana endaweni iso amavesi acinene futhi nolwelwesi lwamafinyila. Endabeni ka contact ngephutha ne ebusweni isikhumba kufanele wageza off ngamanzi. Uma izidakamizwa wangena emlonyeni wakhe - uxubha ingaphakathi nge isixazululo of soda evamile. isidingo Qaphela ukusebenzisa ithuluzi "Pedikulen Ultra". Ukubuyekezwa kusukela ochwepheshe futhi paediatricians okuholela ukuthi isidakamizwa ubhekana waba nezintwala ekhanda.
Izimali ezivela hemorrhoids
I-US labantu esikhathini sesimanjemanje